IPharadesi Lamanzi! - I-Airbnb
Birkdale, Queensland, i-Australia
I-Guest Suite itholakala kalula emgwaqeni onokuthula endaweni ehlonishwayo ye-Aquatic Paradise canal estate. Kungama-400m kuphela ukuya e-Birkdale Fair Shopping Center noma ama-800m esiteshini sesitimela. I-Waterloo Bay foreshore enezindawo ze-BBQ kanye nenkundla yokudlala yezingane iqhele nge-1km nje. Sijabulela umoya opholile lapha.
Kukhona izindawo zokudlela, izitolo ezinkulu, izitolo zekhofi, ama-ATM, imigoqo kanye neposi konke kungakapheli imizuzu emi-5 yokuhamba.
Ukufinyelela emigwaqweni emikhulu, isikhumulo sezindiza kanye nesikhungo sezemidlalo saseChandler akukude.
I-Guest Suite yesimanje, ebanzi iyingxenye yendlu yethu kodwa ihlukaniswe ngokuphelele futhi inomnyango wayo. I-Guest Suite inamakamelo okulala angu-2, igumbi lokugezela, indlu yangasese ehlukene, kanye nepulani evulekile yokuphumula-yokudlela-ikhishi. Izitebhisi ezi-2 ezincane zihola ukusuka endaweni yokuhlala ukuya emakamelweni okulala/igumbi lokugezela (bona isithombe). Igumbi ngalinye lifakwe isiphephetha-moya.
Igumbi lokulala elikhulu linombhede olingana nendlovukazi kanti elesibili linemibhede emibili eyodwa. Ikamelo ngalinye linekhabethe elakhelwe ngaphakathi.
Ikhishi lifakwe kahle isiqandisi, i-microwave, i-coffee plunger, amapuleti ashisayo ama-2, uhhavini ophathwayo, ipani lokuthosa, amabhodwe ama-2 kanye nokutholakala kahle kwezinto zengilazi, izitsha nezinto zokusika. I-pantry inikezwa ikhofi, itiye, ushukela, usawoti, upelepele namafutha.
Igumbi lokugezela linengilazi egcwele eyize phezulu, okugeza okuphumuzayo, neshawa. Kukhona nomshini wokuwasha olayisha ngaphambili otholakala endlini yokugezela. Impushana yokuwasha ihlinzekwa. Indlu yangasese ihlukene nendlu yokugezela.
I-WiFi esheshayo esheshayo iyatholakala kuwo wonke amagumbi.
I-Guest Suite iwumndeni omuhle ngombhede ophathwayo, ukugeza kwezingane kanye nesihlalo esiphezulu. Isihlalo sesibili esiphakeme siyatholakala uma usicela. Kunemidlalo eminingi eyenzelwe izingane ezindala.
Kukhona indawo yokupaka ngaphandle komgwaqo eduze komnyango weGuest Suite.
Qaphela: uma ufuna ukuhlala isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezingama-90 sicela usithinte ukuze uthole amalungiselelo akhethekile.
I-Birkdale iyindawo engaphansi kwe-bayside etholakala eWaterloo Bay. Uma ujabulele imisebenzi yamanzi kukhona izindawo zokuphambana kwezikebhe eduze nezindawo ezimbalwa zokuqalisa izikebhe/i-kayak. Ukudoba kudumile kusukela endaweni ye-Aquatic Paradise West Park. I-West Park inenkundla yokudlala yezingane kanye nezinsiza ze-BBQ. I-Queens Esplanade inendlela yokuhamba edumile yokuzivocavoca.
I-Moreton Bay Cycleway idlula e-Birkdale. Kuvamile ukubona amaqembu amakhulu abagibeli bamabhayisikili kulo mzila nganoma yisiphi isikhathi sosuku kodwa ikakhulukazi ekuseni ngezimpelasonto.
Siyajabula ukukusiza ngolwazi lwendawo yokuhamba kanye nokuhlela uhambo lwakho lokuhlala. Ku-Guest Suite kukhona izincwajana ezikhuluma ngezinto okumele uzibone futhi uzenze.
Sihlala endlini enkulu futhi singakusiza nganoma yimiphi imibuzo eyengeziwe ongase ube nayo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Birkdale namaphethelo